Minia jamba mijabajaba an-jambany… | NewsMada
5 febroary omaly, 7 febroary rahampitso. Tantara avokoa izany, raha itodihana ny omaly ary banjinina ny rahampitso. Faha-41 taon’ny nandraisan’ny kolonely Ratsimandrava fahefana tamin’ny jeneraly Ramanantsoa, ny 5 febroray 1975, omaly; ary fahafito taon’ny nisian’ny fitifirana mpanao fihetsiketsehana teo anoloan’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra, ny 7 febroary 2009, rahampitso.
Tena misy ve izay hoe fitodihana ny lasa sy fibanjinana ny ho avy izay? Na ho an’ny vahoaka io, na ho an’ny mpitondra. Laingalainga, tsy fantatra akory izay tena marina tao ambadika raha ny amin’ireo raharaha ireo. Na iniana afenina, na tsy sahy atrehina, na ifandroritana… Toy izay efa nisy hatramin’izay eo amin’ny tantaram-pirenena ihany: 29 marsa 1947, 10 aogositra 1991, 11 febroary 1975…
Mangala-dia ny eritreritra: sao ny tsy fahalalana na tsy firaharahana ny lasa no andehanana an-jambany ankehitriny, mampijabajaba amin’izay ho avy? Hany ka sasatry ny miarina, fa toy ny tsy nisy ny lasa ary ny ho avy tsy fantatra be ihany. Ny ankehitriny ihany no heverina ho tena zavatra, fanombohan-javatra… Tsy mahagaga raha miverina hatrany ny fahadisoana sy ny hadalan’ny teo aloha.
Mampidona amin’ny rindrina izay fijabajabana noho ny tsy fahalalana sy tsy firaharahana ny lasa izay. Tsy vitan’izany, mbola mikimpy koa amin’izay ho avy: mandeha an-jambany. Tsy mahalala afa-tsy ny ankehitriny? Izay ihinanana aloha, ny tombontsoa manokana… Tsy voasoritra mazava koa izay lalan-kaleha, ny tanjon-kitodiana, izay fomba hahatongavana amin’izany…
Izany rehetra izany no mbola mampihitsoka sy mampikatso ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny? Sasatry ny miarina, miverina amin’ny fahadisoana teo aloha, mitsapatsapa lava… Ao anatin’ny haizin’ny tsy fahalalana? Na minia mikimpy… Ilaina ny mahalala ny lasa itandremana sy itondrana ny ankehitriny ho amin’ny famaritana ny ho avy… Raha tsy izany, mijabajaba an-jambany ny tena.
Fiteny mandrakariva ny hoe mitsara ny tantara. Tsarain’ny tantara tsy fantatra na tsy hita izay marina tokoa ny ankehitriny, matoa mikatso amin’izay atao…